Munyika umo kupfuura nechetatu michato kutanga paIndaneti, mumwe munhu angafunga kuti kudanana pamusoro Indaneti hakwaizova pfungwa zvakaoma kudaro kunzwisisa.
zvisinei, vamwe vanhu vachiri kuomeswa mate mukanwa nokuoma kutanga ukama paIndaneti uye kwete yomunharaunda nomuzariro zvaiitika kana kuti kusagadzikana shamwari-of-a-shamwari akamisa.
Pfungwa iyi kunoita sezvechinyakare kuziva, izvo zvinoita kuti kubvunza mibvunzo. Hezvino zvikarakadzo zvishomanene tiri vakagadzirira kurega pamwe bofu yemichindwe uye matafura chete chete.
Zvakadini kana munhu anozova kuva mhondi? Zvadaro, kuti dai muchayamwa. zvisinei, chii kana wako chinokosha zvimwe zvinoitika kuva mhondi? Kana weirdo? Kana ane imwe kun'anga chete zvekumwe zvibereko? Ndiko kudanana: vachitarisira mumwe munhu haasi psycho.
Regai ukaona kuti safadza? chokwadi, uyu ndiwo mumwe mukuru asiri iwo paIndaneti kufambidzana. Kana munhu kuseri kiibhodhi, vanonzwa zvakawanda shoma kumanikidzwa, izvo kunovaita here anozaruka. Ndicho akasiyana zvachose nokukurumidza kudanana uye panguva ukasangana chiso nechiso, zvose hurukuro maduku shiri! Tine nguva dzose kuwana pasi nyaya zvinonyatsokosha uye aunombodarika ari netsa banter.
Zvakadini kana havatariri kufanana zvavo mifananidzo? Kutanga kwazvose, Ndinogona kuvimbisa kuti kana vasangane neni handidi achinyemwerera kubva nzeve kuti nzeve zvakakwana chiedza, riri chii photos angu anoratidza I Dzakafanana. Ndizvo zvakaitwa mapikicha vari kuti. Kana vakadzokerazve panze kuti hatisati munhu chete ari mufananidzo wavo, Ndinogona chete tariro unhu hwavo machisi mashoko kuti ndiswedere kuzosangana navo. Kana munhu tiri kufarira anga pamusoro ndivanaani, zvisinei, tsvuku Mireza achaita mifananidzo inokukurudzira kose kose.
Uri gumirwa? Kwete kana kusatonzwa wakaora kupfuura munhu upi zvake achitsvaka rudo. vanhu Single vose asingafariri, tarisira, kushivirira uye mhanya, hatisi? Chinonyanya kukosha ndechokuti: hazvisi nyore kusangana vanhu ikoko zvakare. Zvinonyaradzawo zvisiri nyore kuenda kumashopu, asi ndosaka isu kutenga mbatya dzedu paIndaneti!
Sei havazodyari iwe chete ndiise iwe nomumwe munhu? Nekuti mapofu misi vari kuzivikanwa semhosva. Just nokuti shamwari dzedu somunhu, hazvirevi tichaita uye ndine pati wechitatu mwoyo kana nenjodzi kunoita zvose kuipa.
Sei here kuziva mumwe paIndaneti? Saizvozvowo Ndinoziva zvose shamwari dzangu kufarira Sex uye City Zvikamu, tete vangu achiongororwa mazamu zvabuda navatana muzvinafundo vangu chaivo pakuberekwa urongwa. In nhasi uye zera, tine zvose pamusoro Internet. Tiri kuramba vachikurukurirana paIndaneti, isu kumutsidzira paIndaneti, isu nekutaura uninteresting ose okupedzisira zvakadzama hwedu paIndaneti; zviri chete zvakarurama tinoona rudo ikoko.
Hakuzi zvinodhura? Kwete kana iwe kuzviita zvakanaka. Hapana chikonzero chaicho kuva miriyoni Profiles akasiyana ichingotenderera web. Tsvaka nzvimbo kuti inoshanda kwauri, kusaina uye uvape. Ndinovimbisa zvichaita zvose anopedzisira ari isingadhuri kupfuura zvipfeko zvitsva iwe atenga kuenda, kana kunwa waifanira undozvitengera kumirira mumwe munhu ape, etc..
regai Unoda kusangana vanhu inowanzotorwa nzira? chaizvoizvo. mira. Zviri 2014? Iyi ndiyo chakaipa nzira!
Misangano vanhu vari munhu havazofi akagura zviripo. Just nekuti tikasarudza zvevakomana paIndaneti hazvirevi Kupfeka nezvaro kuti vamwe nyika.
Tingave kwedu mweya wako kombiyuta kana chidhina kure, isu kungoda kuwira madly murudo. No mubvunzo nezvazvo.